SomaliTalk.com » C/KARIIN GUULEED GALBAYE FADLAN BASHIIR GOOBE IYO C/XAKIIN SAACID HALA INAWADA DHAAFIYO!
Intaa kabacdi,maalintii shalay ee Sabtida aheyd taariikhduna ku beegneyd (24/05/2014) abaarihii 11:20AM ama barqanimo ayaa waxaa weerar lagu qaadey Xarunta Golaha Shacabka oo eey ku nafwaayeen tiro aan yareyn oo ka tirsanaa Ciidanka Qaranka kuwaasoo difaacayey nafta Xildhibaannada iyo Xaruntaa qaranka inataba.Waxaa sidoo kale ku nafwaayey muwaadiniin kaloo ka shaqeeynaysey xarunta Baarlamaanka. Madaxweyne Xassan Shiekh Maxamuud oo dalka South Africa jooga kagana qeeybgalaya careema-saarka Madaxweynaha dalaka South Africa: Jacob Zuma ayaa wuxuu fariin cod ah ku sheegey bogiisa twitter-kana kusoo qorey “In talaabooyin cadcad ay qaadi doonaan mas’uuliyiinta dalka, saacadaha soo socdana eey dhici doonaan isbadal kasoo biloow ah balse eey xigi doonaan kuwa kale”.Wuxuu sidoo kale sheegay in uu safarkiisii soo gaabiyey dhacdadaa darteed.
Intaa kabacdi waziirkii Amniga Qaranka Mudane: Ckariin Xuseen Guuleed oo ka mid ahaa mas’uuliyiinta dhacdadaa murugada badan kadib gooobta la booqdey Ra’isulwazaaraha dalka Mudane: Cabdi Wali Sheekh Axmed Maxamed ayaa dhiigiisa u shubey dadkii goobta ku dhaawacmay, wuxuuna intaa kabacdi qabtey shir jaraa’id oo uu ku cadeeynayey in uu xilkii Waziirkii Amniga qaranka uu iska casilay. Waa tilaabo geesinimo, waa go’aan raganimo oo aad u adag balse aad u haboon, waloow uu soo daahay oo maalintii Madaxtooyada la weeraray ay aad uga sii habooneyd. Waxaa hubaal ah in eey isaga iyo madaxweynaha kasii wada hadleen is casilaadiisa ka hor. Waxaana sidoo kale wararka hoose sheegayaan in mudaba uu doonayey in uu is casilo fashilka Amni ee jira darteed, balse waqtiga ku haboon in laga dhigo ay isaga iyo Madaxweynahaba hore isula meeldhigeen. Waloow xilkaa mudanuhu ka tagayo hadana C/kariin Guuleed waa tiirka labaad ee madaxweynaha oo ma adka in xilkale oo ku haboon loo magacaabo sida “Lataliyaha Madaxweynaha”, ama xitaa uu si toos ah Madaxweynaha Villa Soomaaliya dalka kala hogaamiyo isaga oo aanan xitaa heyn xil rasmi ah. Rumeeyso ama ha rumeeysane Mudane Ckariin Xuseen Guuleed: Waziirkii horee Amniga Qaranka, Mudane: Faarax Sheekh C/qaadir Maxamed: Wasiirka Garsoorka ee hada xilkaa haya, iyo Madaxweynaha Dalka: Mudane Xassan Sh. Maxamuud si kastaba ha u wada shaqeeyaane waa niman aad saaxibo dhow uwada ah, in badan soo wada shaqeeynayey siyaasada intaaneey soowada galin ka hor, in uu Mudane Xassan talada dalka hantana qeeybweeyn beey ku lahaayeen, hadana dalka iyagaa wada xukuma, islana wada dhameeystandoona inta uu Madaxweyne Xassan talada dalka hayo, ha hayeen jagooyin rasmi ah ama kuwo aan rasmi aheynba’e. Balse Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Gen. C/Xakiin Daahir Siciid (Saacid) iyo Taliyaha Ciidanka Nabad-Sugida Soomaaliyeed: Jeneraal Bashiir Max’ed Jaamac (Bashiir Goobe), ee fashilkaa Amni la wadaagtaa mudane C/kariin Guuleed waa in aaney ka harin isaga, oo ama eey is casilaan ama jagooyinka laga qaado oo degdeg loo wada eryo.